"Ulwaphulo-mthetho lwedike", uloyiko kunye nefantasy evela kwisandla sikaGemma Herrero. | Uncwadi lwangoku
UDiana Millan | | Iincwadi, Uloyiko
UGemma Herrero ugqibe kumjikelo wokugqibela kwi-Amazon Literary Prize yale 2017 ngomsebenzi wakhe omnandi «Los crime del lago». Sinokuqinisekisa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba le yinoveli ethi Akashiyi nawuphi na umthandi wohlobo oloyikisayo engenamdla.
Kwi 2001, I-Swanton, idolophu encinci eVermont, inyikima liliza lokubulala. Abantwana abathathu babulawa kabuhlungu Unxweme lweLake Champlain. U-Eric, umfana oselula ochithe ubuntwana bakhe edolophini, unyanzelekile ukuba abuyele kulaa ndawo yamzisela iintlungu, efuna iimpendulo.
Emva kokubulawa kwaba bantwana bathathu, kubandakanya u-Anne Austen, uthando lwakhe olukhulu, u-Eric uyatshona kwiintlungu. Ephawulwe ngokubonakala kwabahlobo bakhe kunye namaphupha amabi, ubunyani buka-Eric buqala ukugqwetha. Emaphethelweni okuwa kunye nokugula kwengqondo yakhe, abazali bakaEric bathatha isigqibo sokuyishiya ngasemva le dolophu ngokufudukela eBurlington.
Kwiminyaka elishumi elinesihlanu emva kwentlekele, ivenkile ethengisa iincwadi apho uEric esebenza khona ifumana iodolo yebali elisayinwe nguAnne Austen, "Ababulali beLake." Ukususela ngexesha uEric ephethe loo ncwadi ezandleni zakhe, Uyazi ukuba uvule umnyango ongenakuvalwa ide ifunyanwe yonke inyaniso.
Ngeli xesha, uEric uzimisele ukubuyela kuloo dolophu kwaye ajongane neziporho zangaphambili. Kodwa I-Swanton inomothuko omncinci kuye, imbali iyaziphinda. Ngoncedo lomboni kunye nothimba wenkundla, u-Eric uzakuphanda kude kube sekupheleni ukufumanisa ukuba le dolophu iqalekisiweyo ifihle ntoni.
Nge "ulwaphulo-mthetho lweli chibi" uHerrero uyakwazi ukubamba umfundi ukusuka kwiphepha lokuqala ukuya kwiphepha lokugqibela. Iyelenqe elinomdla, eligcwele ukungathandabuzeki kunye nemfihlakalo efanelekileyo kuyo nayiphi na incwadi kaStephen King. Abalinganiswa basebenza kakhulu kwaye bayahambelana nokukhula kwebali. Kwelinye icala, kukho umsebenzi wasentsimini omangalisayo kunye nophando ngemeko yendawo ezenzeka kuyo iziganeko.
Iziphumo, nazo ziphumelele kakhulu, kuya kufuneka uzifumanise ngokwakho.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nombhali kunye nolunye upapasho, ungathandabuzi ukutyelela iwebhusayithi UGemma Herrero
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Uloyiko » "Ulwaphulo-mthetho lweli chibi", uloyiko kunye nefantasy evela kwisandla sikaGemma Herrero.
Ignotus Awards 2017: konke malunga nabo